Ukuvakasha kwefektri - HUATAO GROUP LTD
I-Huatao Company iyinkampani yokuhweba ebanzi esekwe ku-China Land, egxile kuzo zonke izinhlobo zebhizinisi lokungenisa nokuthekelisa, ukungenisa i-ejenti, ukuthekelisa i-ejenti, ukuthengwa kwe-ejenti, ngokusho kwamakhasimende kudinga ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso. Le nkampani inezinhlobo ezahlukahlukene zebhizinisi, ikakhulukazi ihlinzeka ngemikhiqizo nezinsizakalo embonini yokuthwebula iphepha, imboni yokuphrinta neyokupakisha, ubunjiniyela bezokwakha noma imboni yezinto zokwakha ze-geotechnical, i-aluminium extrusion, ukuphrinta okuphezulu kokudlulisa ukushisa, imboni yezikrini zezimayini, insimbi kanye nokuphathwa kwendle imboni yethu. Ifektri yethu yethule imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme emhlabeni, imishini ethembekile yokuhlola ikhwalithi kanye nesistimu yokuphatha yokukhiqiza eqinile ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ufanelekile efektri 100%.
1. Imigqa Yokukhiqizwa Kwendwangu yeGeosynthetic:
2. Indwangu yokucubungula izindwangu:
3. Imigqa yokukhiqiza umshini wephepha:
Iphrojekthi yomshini wephepha:
Inkampani yethu yamukela noma yikuphi ukucutshungulwa nokukhiqizwa kwe-OEM, sizokwenza ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende zezinto ezibonakalayo, ukucaciswa, ukupakisha nezinye izidingo zokwenza isampula ngokwezifiso, ukuhlolwa kwesampula ngemuva kokufanelekela ekuhlelweni kokukhiqizwa ngobuningi. Ukuqinisekisa ukwaneliseka komthengi.
Ifektri yethu, njengebhizinisi eliholayo lezinto ze-geotechnical eChina, inomlando we-R & D nokukhiqizwa iminyaka engaphezu kwengu-40 Inkampani inezesayensi nobuchwepheshe be-R & Dtechnicians abangama-50:
I-Polyweb Urethane Screen Mesh, I-Airgel Blanket, I-Corrugator Belt, Isikrini Mesh, UDerrick Screen Mesh, Self-Ukuhlanza Screen Mesh,